Khilaaf ba’an iyo xiisad siyaasadeed oo ka dhex aloosan maamulka DDS – Radio Daljir
Khilaaf ba’an iyo xiisad siyaasadeed oo ka dhex aloosan maamulka DDS
Abriil 2, 2020 2:11 g 1
Xiisad siyaasadeed oo sababtay kacdoon saraakiil iyo siyaasiyiin, markii danbena dhalisay xarig iyo ciidamada Liyuu Booliska oo heeggan sare la galiyo ayaa maanta ka dhex aloosan maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS).
Xiisadda ayaa dhalatay kaddib markii xubno kamid ah hoggaanka sare ee Dowlad Deegaanku ay ka aragti duwanaadeen siyaasadda Md. Mustafe Muxumud Cumar Cagjar, Kusimaha Madaxweynaha Dowlad Deegaanka.
Kala-aragti-duwanaanshaha oo aan raaligelin Madaxweyne Mustafe Cumar ayaa sababtay in xabsiga loo taxaabo barotokoolka Madaxwaynaha oo lagu magacaabo Bisle iyo hoggaanka nabadsugidda kililka DDS Cabdi Caadil.
Shir saacado ka socday madaxtooyada DDS oo aan weli la hubin waxa looga xaajooday iyo natiijada shirka ayaa markii u shirku dhamaaday kabacdi, Kuxigeenka Kusimaha Madaxwaynaha DDS Aadan Faarax oo wata ciidan aad u hubeysan kana kooban Liyuu Booliska DDS ayaa u ambobaxay dhanka gobolka Sitti gaar ahaan magaalada Diredhawa. Lama oga ujeedada socdaalka Madaxweyne Kuxigeenka, waxaa se lala xiriirinayaa kacdoonka qaar kamid ah saraakiisha iyo siyaasiyiinta Dowlad Deegaanka Soomaalida.
Daljir kala soco wararka xiisadda ka aloosan Jigjiga, Diredhawa iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 205 Wararka 19781
Madaxweynihii hore Galmudug oo ka hadlay dagaalka ka socda Kismaayo
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo Qardho Tababar Ciidamo ugu soo xiray (Daawo)
Mustafe 2 months ago
Tani waa mid lagu yaqaan
Iyo marka uu ku fashil wixii loo doortay ee ahaa in xuduudaha la sugo
Lana qaysado itoobiyada kale in ay isku mashquul
Iyagoo waxyarkoogu yaraa waa mid laga dabeeyo waayo maha dad xor ah oo iyagu isqabto balse cidkale ayaa laga kalo amar qaadan
Tani kuma cusbo deegaanka
Ninkasta sidii lagu keenay ayuu ku baxaa